भिडियो ट्यूटोरियल: एडोब फोटोशपमा डबल एक्सपोजर प्रभाव क्रिएटिव अनलाइन
आजको भिडियो टिपमा हामी एक धेरै साधारण प्रभाव हेर्न जाँदैछौं। यस प्रभाव को जादू वास्तव मा यसको आकार मा यति धेरै झूठ छैन, तर यसको सामग्री मा। यो एडोब फोटोशपमा डबल एक्सपोजर हो। केहि असाध्यै सहज र सरल छ जुन हामीलाई असीमित विविधताका अवसरहरू प्रदान गर्दछ र त्यो कारणको लागि थप वैचारिक कार्यको आवश्यकता पर्दछ। यो एक चुनौती हो र एक राम्रो सूत्र एक ग्राउंडब्रेकिंग र बलवान परिणाम प्राप्त करने के लिए। के तपाईं एक डबल एक्सपोजर प्रस्ताव गर्न हिम्मत गर्नुहुन्छ?
हाम्रो भिडियो ट्यूटोरियलमा हामी अनुसरण गर्न लागेका चरणहरू निम्न छन्। हाम्रो नुस्खा सम्झना छैन!
हामीले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको हाम्रो छविहरू हेर्नु हो। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि हामी एक मोल्डको रूपमा प्रयोग गर्न जाँदैछौं (यस अवस्थामा, हाम्रो पात्रहरूको लागि एक) ठूलो प्रकाश विरोधाभास छ। त्यो छायाँ र पूरै प्रकाशको साथ पूरै बाढी भएको क्षेत्र छ। आदर्श चीज भनेको छविहरूसँग काम गर्नु हो जुनसँगaसजातीय र सेतो पृष्ठभूमि। अर्कोतर्फ, यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले सिल्हूटमा एकीकृत गर्न लाग्नु भएको तस्विर पैटर्नको साथ छवि हो र एकदम गतिशील: गगनचुम्बी भवनहरूले भरिएको शहर, हाँगाले भरिएको रूख, एक विस्फोट ...
अर्को चरण हुनेछ दुबै छविहरू अलग गर्नुहोस् र डज र डज उपकरणहरूसँग खेल्नुहोस्। अधिक मुख्य एकीकरण प्राप्त गर्नका लागि उद्देश्य हाम्रो मुख्य छविको विरोधाभास बढाउनु हो।
अर्को चरण एउटा फोटो आयात गर्नु हो जुन हामी हाम्रो पात्रहरूको रूपरेखा भित्र एकीकृत गर्न चाहन्छौं। हामी तपाईंलाई स्वचालित रूपमा एक दिनेछौं रास्टर वा उज्यालो ब्लेन्डिंग मोड.
हामी यसको उपकरणहरू प्रयोग गर्नेछौं अन्डररेपोज र ओभररेस्पोज फेरि आवश्यक छ र पनि इरेजर।
हामीसँग पहिले नै एक राम्रो परिणाम छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » भिडियो ट्यूटोरियल: एडोब फोटोशपमा डबल एक्सपोजर प्रभाव
जियोभान्नी पेरेज (@ Ch4RLY_502) भन्यो
राम्रो, साझेदारीको लागि धन्यवाद।
जियोभन्ने पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस् (@ Ch4RLY_502)
तपाई जियोभान्नीलाई स्वागत गर्नुहुन्छ, तपाईलाई उपयोगी भएकोमा म खुशी छु। शुभकामना।
पेपरवल्फ: एक रचनात्मक कागज मूर्तिकला सिर्जना गर्नुहोस्